VaTsvangirai Vanoparura Chirongwa cheHutsanana muBudiriro
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vaparura hurongwa hwehurumende hwekukurudzira veruzhinji kuti vachengetedze mvura mumaguta senzira yekuti veruzhinji vagare vaine mvura nguva dzose.
Chirongwa ichi chinoitwa apo hurumende iri mubishi kurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena pamwe nehutsvina.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weBudiriro muHarare neChishanu, VaTsvangirai vakurudzira veruzhinji kuti vashandise mvura zvine mwero kuitira kuti makanzuru agokwanisa kuvawanisa vanhu mvura nguva-nenguva.
VaTsvangirai vati chimwe chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika, kunyanya muHarare, inyaya yekuti veruzhinji vari kusvibisa pombi dzinofamba nemvura zvinopedzisira zvaita kuti kanzuru itadze kuchenesa mvura iyi kuti igozoshandiswa neveruzhinji.
VaTsvangirai vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuti zvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena zvipere munyika.
Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rezvehutano, VaDouglas Mombeshora, vatsinhira zvataurwa naVaTsvangirai vachiti hutsanana, kubudikidza nekurasira marara mumabhini nekuchengetedza mvura, hunobatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika.
Gurukota rezvemvura, VaSamuel Sipepa Nkomo, vatiwo hurumende iri kushandawo zvakaomarara kuti ipedzise kuvaka madhamu anoti Mazowe, Tokwe Mukosi pamwe neKunzvi kuitira kuti pasave nedambudziko remvura munzvimbo dzakawanda.
Mumwe mugari wemuBudiriro ati kunyange hazvo vari kufara nechirongwa chaparurwa, nzvimbo yavanogara ine dambudziko remvura nguva zhinji.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti vanhu vanofanirwa kugara vachinwa mvura yakachena kuitira kuti vasabatwe nezvirwere.
Vamwe vakuru vakuru vehurumende vanga varipowo pakuparurwa kwechirongwa ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Va Arthur Mutambara, vakafanobata chigaro chegurukota rezvematunhu, Va Joseph Made, pamwe negurukota rezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko, VaNelson Chamisa.